လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ esplicit internet အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသောမြီးကောင်ပေါက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Profiles (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်
J ကိုလိင် Res ။ 2014 မတ်လ 26 ။
Doornwaard သည် SM1, ဗန်တွင်း Eijnden RJ, Overbeek, G, Ter Bogt TF.
ဤလေ့လာမှုကဤအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောအချက်များနှင့်ဤလမ်းကြောင်းများရှိဆယ်ကျော်သက်များအတွက်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ကွဲပြားခြားနားစွာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်လူတစ် ဦး ဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုကို အသုံးပြု၍ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအားလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ပစ္စည်း (SEIM) ၏အသုံးပြုမှုကွဲပြားခြားနားမှုရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။ SEIM အသုံးပြုမှုအပေါ်ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားကြီးထွားမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှုန်းကွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါင်းစပ် 787 အeight္ဌမဒသမဒသမတန်းဒတ်ခ်ျမြီးကောင်ပေါက်မှတဆင့်လှိုင်းလေးလိုင်း longitudinal ဒေတာအပေါ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယောက်ျားများအကြားတွင် SEIM အသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းလေးခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ Nonuse / Infrequent Use, အားကောင်းစွာတိုးမြှင့်အသုံးပြုမှု၊ ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလျော့ကျခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးများအကြားတွင်တည်ငြိမ်သောအသုံးမပြုခြင်း၊ အကန့်အသတ်မရှိသောအသုံးပြုမှုကြီးကြီးမားမားနှင့် ပို၍ သေးငယ်သောအသုံးပြုမှုနှင့်တည်ငြိမ်သောရံဖန်ရံခါအသုံးပြုခြင်းလမ်းကြောင်းများခွဲခြားထားသည်။
SEIM အသုံးပြုမှုအတွက်မြင့်မားကနဦးအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်အားကောင်းတိုးတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. ရိပ်မိသရုပ်မှန်နှင့်ထို့ထက် ပို. အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဒီဂရီအပါအဝင်လူဦးရေဆိုင်ရာလူမှုရေး Contextual, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွငျကနဦးအဆင့်ဆင့်နှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမတူညီသော SEIM အသုံးပြုမှုကိုဘယ်နေရာတွေမှာအတွက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့ကွဲပြား။ တချို့ဆယ်ကျော်သက်တွင်တစ်ပြိုင်တည်းအနိမ့်အဆင့်ဆင့်ပြသ, ဒါမှမဟုတ် SEIM အတွက်အပြိုင်ခိုင်မာတဲ့တိုးသုံးပါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသွားရမည်အကြောင်း, သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးပွားလာနေချိန်တွင်, ယောက်ျားလေးတစ်ဦးအဖွဲ့ခွဲကိုသူတို့ SEIM အသုံးပြုမှုလျော့နည်းသည်။